डीवीएलए दर्ता | मेरो कार आयात
युनाइटेड किंगडममा तपाईंको कार दर्ता गर्दै
तपाईको गाडी दर्ता गर्नका लागि कागज प्रबन्ध गर्दै
मेरो कार इम्पोर्टले एक पूर्ण समग्र सेवा प्रदान गर्दछ तपाईको कार पूर्ण युके रोड डिभ्लासँग दर्ता भएको छ। हामीले डीभीएलएको साथ बलियो सम्बन्ध बनाएका छौं र यो सुनिश्चित गर्न सक्षम छौं कि हामीसँग आयात गर्दा तपाईंको दर्ता छिटो र मुद्दा बिना नै हुन्छ। रेजिष्ट्रेसन र परीक्षण आवश्यकताहरू इन-हाउससँग व्यवहार गरिन्छ र हामी नियमहरू अनुरूप छन् भनेर सुनिश्चित गर्न हामी सवारीलाई परिमार्जन गर्न सक्षम छौं।
यदि तपाईं युरोपबाट कार आयात गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी अनुरूपताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न काम गर्नेछौं (यदि तपाईं पहिले नै एकको स्वामित्वमा हुनुहुन्न भने)। यस कागजातले त्यसपछि परिभाषित गर्दछ कि युके रोड रेजिष्ट्रेसन नियमहरूसँग अनुकूल हुन के के परिमार्जनहरू आवश्यक छन्। यसले सामान्यतया हेडलाइटहरू, स्पीडोमिटर र रियर फोग प्रकाश प्रकाश परिमार्जन गर्दछ। हामी तपाईको कार युके रोड पारस्परिक मान्यता प्रक्रिया बाट V55 आयात आवेदन को लागी पंजीकृत को प्रक्रिया को लागी सबै कागजी कार्यहरू सम्हाल्न सक्दछौं।
गैर यूरोपीयन आयातका लागि, हामी देशमा कारको NOVA प्रविष्टि, IVA परिमार्जन र पूर्ण परीक्षण, साथ साथै DVLA दर्ता प्रक्रिया ह्यान्डल गर्दछौं।
हामीलाई तपाईंको गाडी दर्ता साथ मद्दत गर्नुहोस्
जुनसुकै सवारी साधन हामी यहाँ छौं तपाईलाई अनुभवी सम्पत्तीको साथ सहयोग गर्न जुन मिलियन पाउन्ड सुपरकार्सबाट अमूल्य क्लासिक कारहरूमा सबै चीज आयात गरेर आउँदछ।
के तपाइँ एक पूर्व युके कार रेजिष्टरिंगमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि एक पटक युनाइटेड किंगडमबाट आएको गाडी हो तर अर्को देशमा विदेशी प्लेटहरू अन्तर्गत दर्ता गरिएको छ भने, तपाईं के गर्नुहुन्छ?
ईयू अन्तर्गत वाहन बजार आयात र निर्यात को मामला मा फस्टाएको छ। सामानहरु को स्वतन्त्र आवागमन को मतलब छ कि एक वाहन ईयू भित्र कहीं पनी लिन सकिन्छ धेरै जसो केसहरुमा कर को प्रभाव बिना। अनुरूपताको प्रमाणपत्र को लागी धन्यवाद जो ईयू नियमहरु को लागी मानक सेट गर्दछ - सवारी साधन सजिलै संग छिमेकी राज्यहरु लाई धेरै जसो मा निर्यात गर्न सकिन्छ।
पहिले जस्तो बेलायतमा दर्ता गरिएको कार जुनसुकै कारणले फर्कनेछ - हामी यसलाई पुन: दर्ता गर्ने प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्छौं। प्राय: सवारी साधन अन्य देशमा प्रयोगको लागि परिमार्जन गरिएको हुन सक्दछ यस्तो हुन्थ्यो कि यदि यो बेलायतमा ताजा आयात भएको हो भने।
त्यस्तै रूपमा हामी तपाईंको तर्फबाट पूर्व बेलायतको गाडीलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया गर्न सक्छौं र तपाईंको तर्फबाट डीवीएलए रेजिष्ट्रेसन गर्न सक्दछौं।
म कति गाडी ट्याक्स तिर्ने छु?
युनाइटेड किंगडमका सवारी साधनहरू वार्षिक करको अधीनमा हुन्छन् जुन यहाँ सवारीसाधनका लागि भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ।
युनाइटेड किंगडम मा वाहनहरु एक वार्षिक कर को अधीनमा छन् कि वाहन को लागी यहाँ चलाउन को लागी तिर्नु पर्छ। यो वाहन को उत्सर्जन मा आधारित छ र सही कर तिरेको सुनिश्चित गर्न को लागी धेरै ब्यान्डिंग छ।
युनाइटेड किंगडममा नयाँ वाहनको दर्ता पछि, एक-कर भुक्तानी हुने भुक्तानी हुन्छ १२ महिना पछि, तपाइँले एक निश्चित दर तिर्नुहुनेछ। यसलाई पहिलो कर भुक्तानी र दोस्रो कर भुक्तानी भनिन्छ।
तर तपाई कति तिर्नुहुनेछ? ठिक छ, यो पूर्ण रूपमा कार र पंजीकरणको लागि मार्गमा निर्भर गर्दछ।
तपाईको गाडीको उत्सर्जन त्यति नै ठूलो हुनेछ यसैले कर लाग्ने छ। यो जहाँ पंजीकरणको लागि मार्गले तपाईंको आयातको कूल लागतलाई ठूलो असर गर्न सक्दछ।
कहिलेकाँही यो IVA परीक्षण योजना अन्तर्गत अनुपालन प्राप्त गर्न अधिक लाभदायक हुन सक्छ। एक IVA परीक्षण पछि, उत्सर्जन केवल १ under०० सीसीमुनि मुनि वा वर्गीकृत गरिएको छ।
यो नोट गर्न महत्वपूर्ण छ किनकि यदि तपाईं 'लम्बोर्गिनी अभेन्टोर एलपी 770०' जस्तो केहि स्वामित्व पाउन योग्य हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले लगभग 450० ग्राम / किमी कोमि उत्पादन गर्दछन्। कुन लगभग तपाईंको पहिलो कर भुक्तानी £ २००० भन्दा बढी खर्च हुनेछ?
IVA योजना अन्तर्गत, समान कारले तपाईको पहिलो कर भुक्तानीको लागि धेरै कम लागतमा करको लागि दुई ब्यान्डि toहरूको कारण बहु ट्याक्स समूहहरूको विपरित हो। यो वास्तवमै १'०० डलर भन्दा बढीको यो 'उदाहरण' मा बचत गर्दै CoC को लागत जुन लेख्ने समयमा £ ००० हो।
हाम्रा धेरै ग्राहकहरु हामी उनीहरुको गाडीहरु आयात गर्न विश्वास गर्छौं किनभने उनीहरु दर्ता को लागी सबै भन्दा लागत प्रभावी विकल्पहरु खोज्न हाम्रो लगनशीलता को कारण।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी केवल यूनाइटेड किंगडमा IVA टेस्ट लेन हो जुन निजी स्वामित्वमा छ र M1 क्लास कारहरूको परीक्षण गर्न सक्षम छ।
तपाइँको गाडी को पंजीकरण को बारे मा एक प्रश्न छ? उद्धरण फारम भर्न हिचकिचाउँनुहोस् ताकि हामी थप मद्दत गर्न सकौं।
बेलायतमा कार दर्ता गर्न कति खर्च हुन्छ?
कार पञ्जीकरणको लागत पंजीकरणको लागि मार्गमा निर्भर गर्दछ, र गाडीमा नै। डीभीएलएलाई भुक्तानी शुल्कहरू कार रेजिष्टर गर्नको लागि समग्र लागतको एक सानो अंश हो।
V55 के हो?
एक V55 फर्म हो जुन तपाईको सवारी वाहन युनाइटेड किंगडममा दर्ता गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईंको परीक्षण पूरा गरे पछि तपाईंको पक्षबाट अनुप्रयोग पूर्ण हुन्छ र तपाईंको NOVA नम्बरको साथ सबमिट हुन्छ। हामी तपाईंको गाडीको पञ्जीकरणमा ढिलाइ हुने परिणाममा कुनै पनि मुद्दाबाट बच्न तपाईंको अनुप्रयोग सही भएको सुनिश्चित गर्दछौं। यदि तपाईंले गाडी आफैं आयात गर्नुभयो र कागजी कार्यमा सहयोग चाहियो भने सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
एक V5C के हो?
तपाईंको गाडीको सफल पंजीकरणमा, तपाईंको गाडीको विवरण सहित एक लगबुक तपाईंले प्रदान गरेको ठेगानामा पठाइनेछ। यो युनाइटेड किंगडममा सवारीसाधनको स्वामित्वको महत्त्वपूर्ण अंश हो र सवारी साधन मूल देशबाट दर्ता प्रमाणपत्रसँग मिल्दोजुल्दो छ जुन तपाईंले आफ्नो सवारी दर्ता गर्दा हामीलाई प्रदान गर्नुहुने थियो।
के तपाइँ अनुरूपताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं दस्तावेज हराई रहनु भएको छ कि डीभीएलएले तपाईंको गाडी दर्ता गर्नु आवश्यक छ सम्पर्कमा आउन नहिचकिचाउनुहोस् र यदि तपाईंको गाडी EU भित्रबाट छ भने हामी सोर्सिंगमा सहयोग गर्न सक्दछौं।
मेरो वाहन NOVA बुझाइएको छैन?
यदि तपाईं पहिले नै युनाइटेड किंगडममा गाडी दर्ता गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको NOVA पूरा गर्न मद्दत चाहिन्छ भने हामीसँग सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्। हामी तपाईको तर्फबाट गाडी आउने सूचना पूरा गर्न सक्दछौं।
तपाईं कसरी द्रुत सवारी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी डीवीएलएसँग नजिकबाट काम गर्छौं र हामी केहि पनि वाचा गर्न सक्दैनौं - हाम्रो परिसर केवल निजी स्वामित्वको IVA परीक्षण लेन हो। यसको मतलव हामी अरू कसैको भन्दा छिटो IVA परीक्षणको लागि कार निर्धारित गरीएको हुन्छौं, र यसको मतलब यो पनि हामी दर्तामा कुनै पनि मुद्दामा विजय पाउन हामी DVLA सँगसँगै काम गर्छौं।
के तपाईं खरानी आयात रेजिष्ट्रेसनसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ?
तपाईंको गाडी कहिँ बाट आए पनि हामी यसलाई दर्ता गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। तपाईंको अद्वितीय आवश्यकताहरू छलफल गर्न सम्पर्कमा रहनुहोस् र हामी सँगै bespoke उद्धरण राख्नेछौं।
टाढाको दर्ता के हो?
त्यहाँ धेरै संख्यामा सवारी साधनहरू छन् जुन हाम्रो परिसरमा आउन आवश्यक पर्दैन। आवश्यक लगिष्टिको कम मात्राको कारण यसले दर्ता प्रक्रियालाई गति दिन मद्दत गर्दछ। प्राय जसो ईयु भित्रका गाडीहरू बीमा गराउन बीमा भएका व्यक्तिहरूको लागि लोकप्रिय विकल्पले स्थानीय गाडीमा उनीहरूको गाडी परिमार्जन गर्दछ र हामी तपाईंको गाडी दर्ता गर्न आवश्यक कागजी कार्यमा सहयोग गर्न सक्दछौं।
EU निर्मित सवारीका लागि उही दिन वाहन अनुपालन?
ईयू भित्रबाट बेलायतको गन्तव्यको आयातको ठूलो बहुमत स्थानीय ग्यारेजमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ र हामी कागजहरू पूरा गर्न सक्दछौं। यसबाट झन्झट लिनको लागि यद्यपि हामी प्राय जसो केसहरूमा परिमार्जन गर्न र MOT तपाईंको वाहनको महल एकै दिन क्यासल डोनिंग्टनमा हाम्रो परिसरमा गर्न सक्छौं। यो गाडीमा निर्भर गर्दछ त्यसैले कृपया तपाइँको अनौंठो आवश्यकताहरू छलफल गर्न सम्पर्कमा रहनुहोस्।
मैले मेरो विदेशी शीर्षक दर्ता कागजात हराएको छु, के तपाईं अझै मेरो सवारी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी बुझ्छौं कि समय समयमा चीजहरू हराउँछन्। कागजातहरू युनाइटेड किंगडममा कुनै पनि सवारी दर्ता गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण अंश हुन् र तिनीहरू बिना, दर्ता प्रक्रिया कठिन हुन सक्छ। मेरो कार आयातमा हामी दैनिक रूपमा धेरै मुद्दाहरूको डिल गर्दछौं। केवल सम्पर्कमा रहनुहोस् र हामी तपाईंलाई समस्या समाधान गर्न उद्धृत गर्नेछौं। हामी तपाईंको गाडी सकेसम्म चाँडो दर्ता गराउन चाहन्छौं ताकि तपाईं युनाइटेड किंगडममा तपाईंको कारको मजा लिन सक्नुहुनेछ।